လူမှုမီဒီယာ ၅ ခု၏အမှားများ Martech Zone
တနင်္လာနေ့, နိုဝင်ဘာလ 2, 2009 တနင်္လာနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 8, 2016 Douglas Karr
ဒါကထပ်ခါတလဲလဲ post ဖြစ်နိုင်သည် ... ဒါပေမယ့်ငါတကယ်ဒီအလေးပေးရန်လိုအပ်သည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာမဟာဗျူဟာတွေပေါ်မှာကုမ္ပဏီတော်တော်များများလဲကျတာကိုငါကြည့်ခဲ့ဖူးတယ်။ သူတို့ကနောက်ဆုံးမှာလုံးဝစွန့်ပစ်။ သူတို့ကိုငါမဖြေကြားနိုင်ခဲ့ခြင်းကသူတို့ဘာကြောင့်ကြိုးစားခဲ့တာလဲ။
ငါဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအသံချဲ့စက်အဖြစ်စဉ်းစားလိုသည် မယုံနိုင်လောက်အောင် အစွမ်းထက်အသံချဲ့စက်။ အကယ်၍ သင်သည်အများပြည်သူနှင့်ဆက်သွယ်မှုနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၏ခိုင်မာသောအခြေခံအုတ်မြစ်ရှိပြီး၊ သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းခြင်းနှစ်ခုလုံးကိုထိရောက်စွာဖုံးအုပ်ထားပါကသင်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ဂုဏ်သတင်းကိုစတင်တည်ထောင်ခြင်းနှင့်သင်၏လုပ်ငန်းသည်ထင်ရှားလာလိမ့်မည်။ သင့်တွင်သာမန် PR နှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာရှိပါကဆိုရှယ်မီဒီယာသည်၎င်းကိုဖျက်ဆီးပစ်နိုင်သည်။
လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်၏ကျွန်ုပ်၏ ၅ ဒဏ္thာရီများ
လူမှုမီဒီယာဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုအစားထိုး။ သငျသညျ ဦး ဆောင်ဖမ်းယူခြင်းနှင့်သင့်ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအာရုံစူးစိုက်ရန်နေရာတစ်နေရာလိုအပ်နေတုန်းပဲ။
လူမှုမီဒီယာကအီးမေးလ်စျေးကွက်ကိုအစားထိုးသည်။ အီးမေးလ်က တွန်းထိုး ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများနှင့်သင်ဆက်သွယ်နိုင်မည့်အလားအလာများကိုသူတို့အားဆက်သွယ်စေမည့်နည်းလမ်း။ တကယ်တော့ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်လူမှု ၀ ဘ်ဆိုဒ်အသုံးပြုသူများကိုပြန်လာရန်အီးမေးလ်ဆက်သွယ်မှုများစွာလိုအပ်သည်။ သင် LinkedIn, Facebook, နှင့် Twitter မှရရှိသောအီးမေးလ်အားလုံးကိုစဉ်းစားပါ။
ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏မြင့်မားစွာအသုံးပြုမှုဆိုသည်မှာ၎င်းသည်ကြော်ငြာရန်အလွန်ကောင်းသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်ကြော်ငြာများလွှင့်ပစ်ရန်မဟုတ်ပါ ၏ထိပ်ပေါ်မှာ၎င်းသည်အတွင်းမှဆက်သွယ်ရမည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီများစွာသည်သုံးစွဲသူများသည်ဝယ်ယူရန်ရည်ရွယ်ချက်မရှိသောလူမှုမီဒီယာဆိုဒ်များတွင်နဖူးစည်းစာတန်းကြော်ငြာနှင့်စာသားဆိုင်ရာကြော်ငြာများကိုငွေထည့်ကြသည်။
လူမှုမီဒီယာ၏သက်ရောက်မှုကိုတိုင်းတာ။ မရပါ။ လူမှုမီဒီယာသက်ရောက်မှု နိုင် တိုင်းတာသည်၊ သက်ရောက်မှုကိုတိုင်းတာရန် ပို၍ ခက်ခဲသည်။ သင်တစ် ဦး ကိုအလုပ်ခန့်ရန်လိုအပ်သည် အားကောင်းတဲ့ analytics အထုပ် - ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါင်းစည်းမှုဖြင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်၊ (သို့) သင်၏လက်ရှိမှကုဒ်များကိုမည်သို့ထိထိရောက်ရောက်ဖြန့်ဖြူးမည်ကိုတွက်ဆနိုင်သည် analytics ဆိုရှယ်မီဒီယာမှဆောင်နှင့်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖမ်းယူရန်အထုပ်။
လူမှုမီဒီယာ, သင်ရုံရိုးရှင်းပါသည် ထိုသို့ပြု. မဟုတ်ဘူး! လူမှုမီဒီယာသည်မလွယ်ကူပါ။ နေ့လည်စာစားပွဲမှာသင်နှင့်သင့်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအလားအလာကောင်းများနှင့်ပြောဆိုရန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ သူကပြုံးပြတယ်၊ ပြုံးလိုက်တယ်၊ မေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်၊ အဖြေမှန်တွေမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေဆိုနိုင်ပြီ၊ မင်းကနေ့လယ်စာအတွက်ပေးတယ်၊ အွန်လိုင်းမှာသင်သူတို့ကိုဘယ်တော့မှမလာဘူး၊ သူတို့ဘယ်ရောက်နေမှန်းဘယ်တော့မှမသိရဘူး၊ သူတို့ဟာသင်ထက်ပိုပြီးဗဟုသုတရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက် မှလွဲ၍ အခြားဘာမှမသိပါဘူး။
လူမှုမီဒီယာသည်သင်တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးသူနှင့်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ခက်ခဲပါတယ်၊ အချိန်ယူရတယ်၊ မာရသွန်ပြေးပွဲတစ်ခုမဟုတ်ဘူး။ ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်အရှိန်အဟုန်ကိုတည်ဆောက်ရန်အချိန်နှင့်အရင်းအမြစ်များကိုလျှော့မတွက်သောကြောင့်ကုမ္ပဏီများစွာသည်ပျက်ကွက်ကြသည်။ ၎င်းသည်ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်ပြီးရေတိုမဟာဗျူဟာမဟုတ်ကြောင်းသူတို့သဘောပေါက်ကြသည်။
မဟာဗျူဟာတစ်ခုအနေဖြင့်တံခါးမှပေါက်ကွဲထွက်ပြီးမျှော်လင့်ချက်များထက် ကျော်လွန်၍ သင်၏စီးပွားရေးကိုကြီးထွားစေနိုင်သည်။ အဲဒါမရှိရင်သင်ပဝါထဲမှာပစ်လိုက်နိုင်တယ်။
ဤသည်ကြောင့်ပင်အနောက်တောင်လေကြောင်းလိုင်းများနှင့် Zappos သည် Social Media ဖြင့်အောင်မြင်နိုင်သော်လည်း United Airlines နှင့် DSW တို့လည်းမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။ Southwest လေကြောင်းလိုင်းနှင့် Zappos တို့သည်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောကုမ္ပဏီများဖြစ်သည် ရှေ့မှာ ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်ဤအချက်အထိပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ယူနိုက်တက်လေကြောင်းလိုင်းများသည်သူတို့၏တရားဝင်မှုနှင့်ခိုင်မာသောခေါင်းဆောင်မှုကြောင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာမဟာဗျူဟာကိုဘယ်သောအခါမျှအသုံးချနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Real Estate BarCamp Indianapolis တွင်ယနေ့ဆွေးနွေးသူတစ် ဦး အနေဖြင့်သင်သည်အခန်းအတွင်းရှိအေဂျင်စီများနှင့်ပွဲစားများကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ အချို့မှာမိတ်ဆွေကောင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူပါလာဟင်နရီ (နှစ်ခုစလုံးဖြစ်သည်။ ) မြဝတီ နှင့် DK New Media သူမကိုကူညီပေးပါ၊ သူတို့တွေဟာရိုးရာမီဒီယာအားလုံးကိုအမှန်တကယ်ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးအွန်လိုင်းမှာအပြည့်အ ၀ ရပ်တည်နိုင်အောင်ရှေ့ကိုပြေးနေကြပါပြီ။ ပေါ်လာရဲ့ပြproblemနာကမဟုတ်ပါဘူး ဘယ်လို ဦး ဆောင်ရမလဲ…သူမရဲ့လူမှုမီဒီယာမဟာဗျူဟာကိုသူ ဦး ဆောင်လုပ်ကိုင်နေစဉ်ကာလအတွင်းမှာသူတတ်နိုင်သည့်အရှိန်အဟုန်ဖြင့်မည်သို့မည်ပုံထားမည်နည်း။
အခန်းထဲမှအခြားသူများကမူဤမျော်လင့်ချက်နောက်ကွယ်တွင်အလုပ်လုပ်နေကြဆဲဖြစ်သည်။ twitter မရှိပါ၊ facebook မရှိ၊ online persona၊ search engine optimization၊ blogging စသည်တို့မရှိသေးပါ။ သူတို့ကိုငါနှိမ့်ချအမြင်အတွက်ဆိုရှယ်မီဒီယာမဟာဗျူဟာသို့ခုန်ရှိသည်ဖို့စောစော။
အသစ်ရောက်ရှိလာသောသူများသည်သူတို့မစီးမီလမ်းလျှောက်ပုံကိုလေ့လာရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အသွားအလာကိုဆွဲဆောင်နိုင်ပြီး realtor နှင့်ထိတွေ့ရန်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည့်ထိရောက်သောဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုလိုအပ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ဒေသတွင်းတွင်သက်ရောက်မှုရှိသည့်သော့ချက်စာလုံးများကိုရှာဖွေရန်နှင့်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည် ရပ်ကွက်များ၊ စာပို့သင်္ကေတများ၊ မြို့များ၊ ခု၊ ကျောင်းခရိုင်များစသည်တို့သည် ဦး ဆောင်သူများနှင့်ယခင်ဖောက်သည်များနှင့်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ရန်အီးမေးလ်သတင်းလွှာကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ သူတို့တပ်ဖြန့်ဖို့လိုတယ် အိမ်ခြံမြေမိုဘိုင်းဖြေရှင်းနည်းများ သူတို့ဂုဏ်သတ္တိများ၏ရှေ့မှောက်၌ stuffing စောင့်ရှောက်သည့်ပျံသန်းအစားထိုးရန်။
လူမှုမီဒီယာသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်များပြားသောပမာဏကိုသင်၏ရောင်းအားသို့ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည်။ သို့သော်သင့်အနေဖြင့်အရောင်းအ ၀ တ်ထားရှိခြင်း၊ ရလဒ်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုင်းတာခြင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်ကိုမှန်မှန်လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ Social media သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ထိရောက်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်ကိုတိုးချဲ့ခြင်းနှင့်အခွင့်အာဏာနှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှအရှိန်မြှင့်လာသည်။
3:2009 pm မှာနိုဝင်ဘာ 10, 03
လူအများက“ Social Media is Cakewalk” ဒဏ္myာရီကိုဆွဲထုတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ရုံး၌အစောဆုံးမွေးစားသူဖြစ်ပြီး၊ တစ်နာရီသို့မဟုတ်နှစ်နာရီတွင်“ Twitter ကိုမှန်ကန်စွာအသုံးပြုရန်သင်ကြားရန်” စီမံခန့်ခွဲမှုကကျွန်ုပ်ကိုအနှောင့်အယှက်ပေးခဲ့သည်။ ဤအရာများသည်အချိန်၊ ကတိကဝတ်များနှင့်သင်ယူလိုသည့်ဆန္ဒရှိသည်။ လူတွေက SM ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲဖြေရှင်းချင်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကငွေရှာဖို့မြန်ဆန်တဲ့နည်းလမ်းလို့ထင်ကြတယ်။ အဲဒါတကယ်မဟုတ်ဘူး၊ သင်လုပ်ပြီးလေ့လာသင်ယူဖို့လိုတယ်။
4:2009 pm မှာနိုဝင်ဘာ 4, 04
ကောင်းပြီ၊ ရှေးလူဟောင်းများက“ ငါ့ကိုမည်သို့မှန်ကန်စွာအသုံးချရမည်ကိုသင်ပေးပါ” ဟုပြောသောအခါတစ်ခါတစ်ရံ၎င်းတို့သည် "ဤနည်းပညာကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းကျိုးအတွက်မည်သို့အလွဲသုံးစားလုပ်နိုင်သည်" ဟုဆိုလိုသည်။ ပြေး…အော် 🙂
3:2009 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 1, 27
ကောင်းတဲ့ဆောင်းပါး၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရုံးခန်းမှာဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေအများကြီးရှိတယ်၊ ငါရုံးပတ်ပတ်လည်ကဒီကိုအီးမေးလ်ပို့မယ်။
4:2009 pm မှာနိုဝင်ဘာ 4, 03
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂျိုး! အကယ်၍ သင်၏ရုံးသည်အနည်းငယ်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာတူးရန်လိုအပ်ပါက၊ DK New Media လုပ်တယ် ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်မလားငါ့ကိုသိပါစေ။
3:2009 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 4, 53
@douglaskarr သင်၏ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများသည်လန်းဆန်းစေသည်၊ အထူးသဖြင့် SM တွင်ပါ ၀ င်ရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးသောသင်၏ခွဲခွာခြင်းရိုက်ချက်ဖြစ်သည်။ စင်စစ်အားဖြင့် SM ကွန်ယက်များကိုကြော်ငြာမက်ဆေ့ခ်ျများပြုလုပ်ရန်အခြားနေရာတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်သူများသည်ထိုကွန်ယက်များ၏ကိုယ်စားပြုမှုကိုအခြေခံကျကျနားမလည်ခြင်း၊ စီးပွားရေးသို့မဟုတ်စျေးကွက်မဟာဗျူဟာအတွက်ကိရိယာတခုမှားယွင်းစွာဖော်ပြသည်။
4:2009 pm မှာနိုဝင်ဘာ 4, 02
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဤမျှလောက် Scubagirl15! အားလုံးသည်မဟာဗျူဟာဖြင့်စတင်သည်။ နည်းပညာသည်ပန်းတိုင်များအားလုံးကိုသတ်မှတ်ပြီးနောက်တွင်သာအသုံးပြုသင့်သည်။ များစွာသောဆိုရှယ်မီဒီယာသမားများသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုကြိုးစားယူလို။ ကုမ္ပဏီရှိသည့်ပြproblemsနာအားလုံးနှင့်ကိုက်ညီအောင်ပြုလုပ်လိုကြသည်။ သင့်ရဲ့ကြင်နာမှတ်ချက်တွေတန်ဖိုးထား!
4:2009 pm မှာနိုဝင်ဘာ 3, 46
ငါသည်ငါ့လူမှုရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဂိမ်းအပေါ်ပြန်ခုန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ နေ့တိုင်းအမှုအရာအလွန်ပြောင်းလဲ။ ငါအရင်တုန်းကအသုံးပြုခဲ့တဲ့နည်းလမ်းတွေအားလုံးဟာထိရောက်မှုသိပ်မရှိတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့်မင်းအရင်ကငါတစ်ခါမှမစဉ်းစားဖူးတဲ့အရာတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးပြီ၊ ငါငါ့အတင်းပါးကိုပြန်အဝတ်ကိုပြန်ယူ။ မကြာမီလူမှုရေးစျေးကွက်၏အားသာချက်ယူပါလိမ့်မယ်!
4:2009 pm မှာနိုဝင်ဘာ 4, 07
traction ဆုံးရှုံးအကြောင်းကိုအလွန်အမင်းစိတ်မပူပါနဲ့။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လူမှုရေးဆိုင်ရာစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းအစောပိုင်းကာလ၌ရှိသေးသဖြင့်လေ့လာစရာများစွာရှိသည်။ ပန်းတိုင်အချို့ကို ဦး စွာရယူပါ၊ မဟာဗျူဟာတစ်ခုတည်ဆောက်ပါ။ အကယ်၍ ဆိုရှယ်မီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်အခန်းကဏ္ AND မှပါ ၀ င်ပြီးအရင်းအမြစ်များကို အခြေခံ၍ အပြုသဘောဆောင်သော ROI ရှိပါကထိုအရာကိုလုပ်ဆောင်ပါ။
4:2009 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 1, 15
အမြဲတမ်း…အလွန်ကောင်းသောအကြံဥာဏ်များ၊ အလွန်ကောင်းသောစိတ်ထားနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှု! ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Doug!